Madaxweynaha Soomaaliya oo kulan Muqdisho kula leh madaxweynaha Midawga Yurub.
Wednesday June 12, 2013 - 11:22:24 in Wararka by Xarunta Dhexe
Wararka laga helayo garoonka diyaaradaha Aadan Cabduulle Cusmaan ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in uu ka sodo gudaha garoonka kulan ay leeyihiin daxweynaha Soomaaliya, Xassan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Midawga Yurub.
kulankaan oo wali waxa looga hadlayo aan saxaafada loo sheegin ayaa waxaa madaxweynaha ku wehliya wasiirka gaashaan-dhigga iyo taliyaha ciidaka Police-ka iyada oo ay goob joog ka yihiin safiira badan oo midawga Yurub ka soca.
Garoonka ayaa hada waxaa ku sugan wariyaal doonaya in ay baahiyaan qodobada shirkaasi kasoo baxa inkasta oo wararka hor-dhaca h ay sheegayaan in ay si wadjir ah saxaafada ugula hadli doonaan qasriga madaxtooyada Soomaaliya xilliga salaada Duhur.
Waa markii ugu horeysay ee madxaweynaha Midawga Yurub uu yimaado Soomaaliya iyada oo ay horay dalka u timid xiligii kala guura Madaxa arimaha siyaasada Midawga Yurub Ashton taas oo kulan muqdisho kula qaaday masuuliyiin uu kmaid ahaa gudoomiyihii KMG ahaa ee baarlamanka Soomaaliya xilligii la dhisay kahor inta aan ladooran Maxamed Cusmaan Jawaari.
Si kastaba, Midawga Yurub ayaa waayihii danbe waxa ay xoogga saartay dar-dar gelinta la socodka xaalada Soomaaliya iyada oo safiir ka socda uu Muqdisho ka how-galo safaarad ay leyihiinna ay ku taallo gudaha xalane.